အောင်တင်ထွန်း – မေ့ပျောက်၍မရနိုင်သော ပြည်သူ့တပ်မတော်ရဲ့အောင်ပွဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
အောင်တင်ထွန်း – မေ့ပျောက်၍မရနိုင်သော ပြည်သူ့တပ်မတော်ရဲ့အောင်ပွဲ
မိုးမခမှ ကူးယူဖော်ပြသည်၊ စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၄
၁၉၈၀ မဆလတပါတီ စစ်အစိုးရလက်ထက် မင်းရန်အောင် စစ်ဆင်ရေးနဲ့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းက ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ ၎င်း၏လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကို စစ်ဆင်ရေးဆင်နွဲခဲ့စဉ်က ဗကပ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက ပြန်လည် တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်ကို မှတ်တမ်းပြုစုရေးသားထားသည့် စာတမ်းကို သိရှိ မှတ်သားနိုင်ရန် မိုးမခက တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရလက်ထက်တွင် ယခင်မဆလစစ်ဗိုလ်ဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီး အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သူက “မောင်ဆွေသက်ရဲ့ ကဒူးမမှ မော်ဖသို့ ” အမည်ဖြင့် ၎င်းဘက်က အတွေ့အကြုံ အထင်အမြင်ကို ရန်ကုန်တွင် စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့ဖူးသည်။ တိုက်ဆိုင်ဖတ်ရှုကြည့်နိုင်ကြပါသည်။
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသမိုင်းမှာ မကြုံစဖူး ကြီးမားလှတဲ့ ထိုးစစ်ကြီး တခုကို ရန်သူမဆလစစ်တပ်က ပါတီရဲ့အခြေခံဒေသကြီး အပေါ်လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီထိုးစစ်ကြီး ကို`မင်းရန်အောင်စစ်ဆင်ရေးကြီး´လို့အမည်နာမတပ်ပြီး ၁၉၇၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ(၁၉)ရက်နေ့ကစပြီး ၁၉၈၀ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ(၆)ရက်နေ့အထိကို မင်းရန်အောင်အဆင့်(၁) အဖြစ်သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ပါတီရဲ့ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက် ရှည်လျားကျယ်ပြန့်လှတဲ့ အခြေခံဒေသကြီးကို ရန်သူ တပ်မ(၇၇) (၈၈) (၉၉) (၆၆)စတဲ့တပ်မ(၄)ခုမှ တပ်ရင်းပေါင်း(၃၄)ရင်း–အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံခြေလျှင်တပ်ရင်း(၂၂)ရင်း နှင့် အခြားလက်ရုံးတပ်ဖွဲ့များ အမြောက်တပ်ဖွဲ့ လေတပ်တပ်ဖွဲ့များနှင့် တမျက်နှာလုံး ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်။
မဆလစစ်အစိုးရရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ဗမာပြည်မကို ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်ပြီး ရှမ်းပြည် အလယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာ အခြေခံဒေသတွေတည်ဆောက်နေတဲ့ မိမိတို့ရဲ့တပ်မဟာ(၆၈၃)ရဲ့ထောက်ပံ့ ရေးလမ်းကြောင်းကြီးကို ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့နဲ့ ၎င်းတပ်မဟာရဲ့နောက်တန်း မော်ဖါဒေသကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန်ဖြစ်တယ်။
ရန်သူတပ်မ(၇၇)ဟာ အဓိကထိုးစစ်ရည်ရွယ်ချက်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖို့ မိမိတို့မော်ဖါဒေသ ကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ရန်သူတပ်မ(၈၈)က တပ်မ(၇၇)ရဲ့ဘေးနံလုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ယူရပြီး မိမိတို့ရဲ့မုံးပေါက်ဒေသ ကြီးအပြင်စည်းခံစစ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ ပန်မကောက်-ရောင်ခေါက်-လွယ်ဆီး-လွယ်ဟိုကာဒေသတွေကို သိမ်းယူရေးအတွကဲ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။
အလားတူ ရမခတိုင်းတပ်များ တပ်မ(၉၉)မှ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များဟာ မိမိတို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ `၀နယ်`တောင်ပိုင်း`၀နယ်`မြောက်ပိုင်း နဲ့ မြောက်ပိုင်းဗဟိုဌာနခွဲဒေသတွေကို ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် ။၎င်းတပ်ဖွဲ့များရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ညီနောင်တပ်ဖွဲ့များကို အဓိကမော်ဖါစစ်မျက်နှာသို့ စစ်ကူမပို့ပေးနိုင်ရန်ထိမ်းချုပ်ဖို့နဲ့ တဖက်မှာလဲ ယောင်ပြ ထိုးစစ်ကြီးများ သဏ္ဍာန်အဖြစ်ပါဝင်ကြပြီး အခြေအနေပေးပါကမိမိတို့ရဲ့လွတ်မြောက်ဒေသ အချို့ကိုဖဲ့ယူရန်ဖြစ်ပါတယ်
တပ်မ(၇၇)ရဲ့မော်ဖါထိုးစစ်စတာနဲ့ တပြိုင်နက် ရမခတိုင်း လှုပ်ရှားစစ်ဗျူဟာ(၂)ရဲ့ကွပ်ကဲမှု အောက် ခလရ(၃၃)ခလရ(၆၇)နှင့်တပ်မ(၆၆)မှတပ်ရင်းအချို့ဟာ မိမိတို့ရဲ့`၀တောင်ခရိုင်´မန်ခူး- မန်ခါ ဒေသ လွယ်ပန်လုံ-မန်ကန်ဒေသများကိုအချိန်ကိုက် တပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။
စစ်ဆင်ရေးကြီးစတင်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မိမိတို့စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ကို အမြန်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ရန်သူရဲ့ထိုးစစ်ကိုရိုက်ချိုးဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒေသအသီးသီးရဲ့ဒေသခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ(ခရိုင် တပ် မြို့နယ်တပ်ဖွဲ့များ)နှင့်လက်နက်ကိုင်ပြည်သူ့စစ်များကို စုစည်းပြီးဒေသအသီးသီးမှာ ခုခံကာကွယ် ရေးစစ်ပွဲတွေကို ဆင်နွှဲခဲ့တယ်။
အခြားတဖက်မှာ မိမိတို့ရဲ့အဓိကတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ တပ်မဟာ(၇၁၇)(မူရင်းတပ်မဟာ-၈) တပ်မဟာ(၇၄၉)(မူရင်းတပ်မဟာ-၁၂)နဲ့တပ်မဟာ(၅)(မူရင်းတပ်မဟာ၆၈၅)တို့မှတပ်ဖွဲ့များက်ိုဆုပ်ကိုင် ပြီးကျယ်ပြန့်ရှည်လျားလှတဲ့စစ်ဆင်ရေးဒေသတလျှောက် လှုပ်ရှားစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီး ရန်သူရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကို ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။
ရန်သူရဲ့ယောင်ပြနဲ့ ထိမ်းချုပ်ရေးစစ်ကြောင်းတွေကိုလဲ ခရိုင်တပ် မြို့နယ်တပ် လက်နက်ကိုင်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ တက်ကြွတဲ့နေရာယူခံစစ်ရှင်များနဲ့ ပြန်လည်ထိမ်းချုပ်ပြီး အခြေခံဒေသခုခံကာကွယ်ရေးစစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။
စစ်ဆင်ရေးရဲ့ အစဦးကာလတွေမှာ မိမိတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့များဟာ ခံစစ်ရှင်တိုက်ခိုက်ပြီး လှုပ်ရှားရန်သူ ကိုချေမှုန်းဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ မိမိတို့ရဲ့ခံစစ်စခန်းတချို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရပြီး ကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ရှားစစ်နဲ့ ချေမှုန်းရေးစစ်တွေ မရယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
မိမိတို့ရဲ့-မွတ်နိုး -၁၈၃၇ပွိုင့်(၆၀၂၈ပွိုင့်)နဲ့ပန်ခါ-ရောင်ခေါက်-ပန်မာကောက်စတဲ့ ခံစစ်စခန်း များကိုခံစစ်ရှင်ဖြင့် တပ်မ(၇၇)-(၈၈)တို့မှ ရန်သူ(၇၀၀)ကျော် သေကျေ-ဒါဏ်ရာရစေပြီးနောက် ၁၉၈၀ခုနှစ်-ဇန်န၀ါရီ(၄)ရက်မှာ ပန်မာကောက်စခန်းမှ မိမိတပ်ဖွဲ့များ ဆုတ်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။
ရန်သူဟာ ပန်မာကောက်ခံစစ်စခန်းကြီးကိုသိမ်းပိုက်ရယူပြီးနောက် `မင်းရန်အောင်´စစ်ဆင်ရေး ရဲ့ပထမဆင့်ပြီးဆုံးပြီ လို့သတ်မှတ်ပြီး ဇန်န၀ါရီ(၇)ရက်နေ့မှစလို့ ဒုတိယအဆင့် စစ်ဆင်ရေးကို စတင်ဖို့ ပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်။
မိမိတို့ရဲ့စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ဟာ ရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေအဖက်ဖက်ကို သုံးသပ်ပြီး ရန်သူရဲ့ဒုတိယခြေလှမ်းကို ရိုက်ချိုးဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။
မိမိတို့ရဲ့ မော်ဖါဒေသနဲ့ ပန်မာကောက်ဒေသတွေကို သိမ်းပိုက်ရရှိသွားတဲ့အတွက် တက်ကြွနေတဲ့ ရန်သူရဲ့တန်ပြန်တော်လှန်ရေးမာန်စွယ်ကို ရိုက်ချိုးပြစ်ဖို့ စစ်ဆင်ရေးကာလအစပိုင်းမှာ မလွှဲမရှောင်သာရောက်ရှိနေတဲ့ အတိုင်းအတာတခုအထိလက်ဦးမှုမဲ့နေတဲ့အနေအထားကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ မိမိတို့ရဲ့ တပ်ဖွဲ့များနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့တိုက်စိတ်ခိုက်စိတ်ကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက် ရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့မှ စစ်မျက်နှာတခုလုံးရှိ ရန်-ငါ (၂)ဖက်အခြေအနေတခုလုံးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ချေမှုန်းရေးတိုက်ပွဲကြီးတပွဲအတွက် တိုက်ကွင်းတိုက်ကွက်ကို ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။
ရရှိထားတဲ့အခြေအနေတွေအနက် ၀တောင်ခရိုင်-လွယ်ပန်လုံ-မန်ခူး-မန်ခါဒေသမှာ တိုက်ကွက် ဖေါ်နိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။၎င်းဒေသသို့သွားရောက်ကာ ရန်-ငါ(၂)ဖက်အခြေအနေကို အကဲခတ် ထောက်လှမ်းပြီး အကျိုးရှိတဲ့ တိုက်ပွဲအခါအခွင့်ကို ရွေးချယ်ရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
ဇန်န၀ါရီ(၁၉)ရက်နေ့မှာ မိမိတို့ရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်အချို့(ဦးဇော်မှိုင်း ဦးဖုန်ကြာဖူး ဦးအုန်းကြည်)ဦးဆောင်မှုအောက်မှာမိမိတို့ရဲ့(၅၀၁)တပ်ဖွဲ့ (၃၀၃၅)တပ်ဖွဲ့(၅၀၃)တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ဒေသအမြောက်တပ်ဖွဲ့မှ ခွဲအထက်ကေဒါတွေ မိမိအပါအ၀င်စစ်ဦးစီးဌာနမှ ကေဒါများဟာ ရန်-ငါအခြေအနေများ ကိုအခိုင်အမာအကဲခတ်ထောက်လှမ်းရေးအတွက် ဦးစွာချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။
မန်ရှန်ဒေသ(ရန်သူအခေါ်မန်မိုင်းဆိုင်)ကိုရောက်ရှိပြီးနောက် မန်ရှန်စစ်မျက်နှာကို တာဝန်ယူခဲ့ တဲ့ ဒုစစ်ဦးစီးမှူး ရဲဘော်အင်ဖန်(ကွယ်လွန်) ခရိုင်တပ်ရင်းမှူးရဲဘော်ဇော်လ(ယခု-အရပ်သား) ခရိုင်တပ် နိုင်ငံရေးမှူးရဲဘော်လဗျ(ကွယ်လွန်)တို့ရဲ့ ရန်-ငါအခြေအနေမိတ်ဆက်ချက်ကို မိမိတို့တဖွဲ့လုံးလေ့လာ နားထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။လွယ်ပန်လုံစခန်းပေါ်မှနေ၍ လက်တွေ့မြေအနေအထားမိတ်ဆက်ချက်များကိုလဲ လေ့လာမှတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။
ရန်သူရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တန့်ယန်းအခြေပြု စစ်ဗျူဟာ(၂)ကို ဒုတိုင်းမှူးကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီး ၁၉၇၉ နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာ တန့်ယန်းမြို့အရှေ့တောင်ဖက် သံလွင်မြစ်အရှေ့ကမ်းရှိမိမိတို့ရဲ့ဝတောင်ခရိုင်မန်ရှန်မြို့အတွင်းသို့ သံလွင်မြစ်ကိုဖြတ်ကျော် ထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ရန်သူ ခလရ (၃၃) (၂၃)(၆၇) –၃ရင်းအင်အားပါဝင်ပြီး မိမိတို့ရဲ့မန်ခါဒိုင်နယ်ရုံးကိုသိမ်းပိုက်ပြီး ဒိုင်နယ်နေရာတ၀ိုက် စခန်း ၅ခု ၆ခုတည်ဆောက်ကာ အခိုင်အမာတပ်စွဲခဲ့တယ်။ခလရ(၆၇)ကသံလွင်မြစ်ကမ်း အနောက်ဖက် ကိုတာဝန်ယူခဲ့ပြီး ခလရ(၃၃)ကအဓိက၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ကာ နေရာယူတပ်စွဲခဲ့တယ်။ခလရ(၂၃)က ခလရ(၃၃)ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း(L.O.C)နဲ့သံလွင်အရှေ့ဖက်ကမ်းခြေကိုချုပ်ကိုင်ထားခဲ့တယ်။
မိမိတို့ပန်ဆန်းဌာနချုပ်မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ရန်သူအင်အားနဲ့တပ်တည်နေရာများဟာ လက်ရှိမိမိတို့တွေ့ရှိမှုများနဲ့ အတန်ငယ်ကွာခြားနေပါတယ်။
မိမိတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဒေသ မန်ခူး-မန်ခါဒေသမှာရန်သူဟာနဂိုမိမိတို့ရရှိထားတဲ့သတင်းများအရ တပ်ခွဲ(၂)ခွဲကျော်(၃)ခွဲနီးပါးဖြစ်ပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတပ်ရင်းတရင်း(၅ ခွဲ)အင်အားဖြစ်နေတယ်။ခလရ (၃၃)ရဲ့စစ်ကြောင်း(၁)(၂)ရုံးများနဲ့ တပ်ခွဲ(၅)ခွဲဖြစ်တဲ့အတွက် အင်အား(၄၀၀)ကျော်ရှိနေတယ်။သူတို့ရဲ့ အထောက်အကူအဖြစ်သံလွင်အရှေ့ဖက်ခြမ်း မန်ကန်ဒေသ-မန်ကန် သံခမောက်-ကံ့ကော် နဲ့သံလွင် အနောက်ခြမ်းမှာ ခလရ(၆၇)နဲ့တပ်မ(၆၆)မှခလရ(၈၀)တပ်ရင်းများ တာကော်ဖက် လွယ်အင်တ၀ိုက်မှာအရန်အဖြစ် စုစည်းရှိနေတယ်။
ဒီလိုရန်သူအခြေအနေများကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ ရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များဟာ ရန်သူအခြေအနေကို စေ့စပ်သေချာစွာ ခွဲခြားစိတ်ဖြာလေ့လာခဲ့တယ်။
(၁)မန်ခူး-မန်ခါဒေသရဲ့စခန်းထိုင်အင်အားဟာ(၄၀၀)ကျော်(၅၀၀)နီးပါးရှိတယ်။သံလွင်မြစ်နဲ့အနီးဆုံး တပ်စွဲထားတဲ့ခလရ(၃၃)တပ်ခွဲ(၁)ကိုဖယ်ထားပြီး မန်ခါ-မန်ခူးဂွင်ထဲမှာရန်သူအင်အားဟာစစ်ကြောင်း ရုံး(၂)ခုနဲ့တပ်ခွဲ(၄)ခွဲ စုစုအင်အား(၃၀၀)ကျော်(၄၀၀)နီးပါးရှိတယ်။မိမိတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ပွဲဂွင်ထဲမှာ ရန်-ငါအချိုးအစားဟာ ၁:၄ ဖြစ်နေတယ်။မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်အင်အားစုစည်းထားနိုင်မှုကြောင့် မိမိတို့ရဲ့အင်အားသာလွန်မှုရှိနေတယ်။
(၂)ရန်သူခံစစ်စခန်း(၁၀)ခုဟာ (၈)ကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းတဲ့ဂွင်ထဲမှာရှိပြီး မြေအနေအထားအရလဲ နည်းဗျူဟာကျတဲ့ စိုးမိုးကုန်းမှာမဟုတ်ဘူး။ခွဲ(၁)စခန်းဟာလဲကျန်အင်အားစုများနဲ့ (၁)ကီလိုနီးပါးဝေးတဲ့မြစ်ဘေးမှာရှိနေပြီး တသီးတခြားစီလိုဖြစ်နေတယ်။
မိမိတို့ဖက်မှာတော့ လွယ်ပန်လုံမှအစပြုလို့သာလွန်တဲ့မြေအနေအထားမှာ များစွာရှိနေတယ်။ရန်သူဟာကာလတိုရောက်ရှိနေမှုကြောင့် ခံစစ်စနစ်ဟာမပြည့်စုံ မခိုင်ခန့်ဘူး။မိမိတို့ဖက်မှာတော့ရန်သူကို လျှို့ဝှက်ဖုံးကွယ်မှုရှိစွာလှုပ်ရှားချီတက်ပြီး ၀ိုင်းပတ်ထားနိုင်တယ်။မြေအနေအထားဟာမိမိတို့အတွက်အလွန်အကျိုးရှိနေတယ်။
(၃)မန်ခူး – မန်ခါစခန်းစောင့် ရန်သူတွေဟာ စစ်ကြောင်း(၁)နဲ့(၂)ရုံးများပါရှိနေတဲ့အတွက် လက်နက်ကြီးအရည်အတွက် မနဲလှဘူး။ အထောက်အကူစခန်းတွေဖြစ်တဲ့မန်ကန်-ကံ့ကော်စခန်းများက တပ်ရင်းသုံးလက်နက်ကြီးများသာမက လွယ်အင်ကျောက်တောင်ပေါ်ကအဝေးပစ်(၂၅)မမပေါင်ဒါအမြောက်ကြီးများလဲရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အမြောက်များရဲ့တည်နေရာဟာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့အတွက် လက်တွေ့အသုံးချမှုမှာ ကြီးစွာအကန့်အသတ်ရှိနေနိုင်တယ်။
မိမိတို့ကသာအမြန်အဆုံးသတ်စစ်ဆင်နိုင်ယင် ရန်သူရဲ့လက်နက်ကြီးမီးအားများဟာမိမိတို့ကို ခြိမ်းချောက်ဖိနှိပ်မထားနိုင်ပါဘူး။ အဝေးကရန်သူအကူလက်နက်ကြီးများဟာ ၎င်းတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကို အပြည့်အ၀ဖွံ့ဖြိုးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲအတွင်းမိမိတို့ရဲ့လက်နက်ကြီးမီးအားများဟာစုစည်းမှုရော အင်အားမှာပါအလွန်သာလွန်မှုရှိနေတယ်။
(၄)မိမိတို့ရဲ့ခရိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံပြည်သူစစ်များဟာမန်ခူး-မန်ခါ ဒေသမြေအနေအထားကို အလွန်ကျွမ်းကျင်သိရှိထားတဲ့အတွက် ရန်သူတွေကိုအဖက်ဖက်မှ ၀ိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖို့နဲ့ မိမိတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကို လုံခြုံချောမွေ့စွာ လမ်းပြပို့ဆောင်နိုင်ကြမယ်။တဖက်မှာလဲ ရန်သူလာရောက်တပ်စွဲထားမှုဟာ မကြာလှသေးတဲ့အတွက် မြေအနေအထားကိုကျွမ်းကျင်စွာမဆုပ်ကိုင်နိုင်ကြသေး။
အထက်မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့တပ်အင်အား မြေအနေအထားစတဲ့ အချက်အလက်များအရ မိမိတို့ရဲ့ရှေ့ တန်းဦးစီးအဖွဲ့ဟာ ယခင်ကမတိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ တပ်ခွဲခံစစ်စခန်း၃-၄ခုကိုတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်တဲ့ တပ်ရင်းအဆင့် စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကြီးကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
(၁) ပထမအဆင့်အနေနဲ့-ရဲဘော်အိုက်ကျုံးရဲ့(၅၀၃)တပ်ဖွဲ့-ခြေလျှင်တပ်ခွဲ(၃)ခွဲဟာမိမိတို့ရဲ့အမြောက် တပ်ဖွဲ့(၂)ရဲ့မီးအားအကာအကွယ်အောက်မှာ ရန်သူရဲ့အမှတ်(၁)တောင်ကုန်း(ဗိုလ်ကြီးညိုဝင်းမြင့်-တပ် ခွဲအခြေပြုနေရာ)ကိုအချိန်တိုအတွင်းသိမ်းပိုက်ရန် ၎င်းနောက-်(က)အမှတ်(၂)မီးအားအဖွဲ့ဟာသိမ်းပိုက် ရရှိထားတဲ့ အမှတ်(၁)ကုန်းပေါ်သို့ အမြန်ရွှေ့ပြောင်းပြီး(၅၀၁)တပ်ဖွဲ့နဲ့(၃၀၃၅)တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့အမှတ်(၆)နဲ့အမှတ်(၇)စခန်းများ(ရန်သူစစ်ကြောင်းရုံးများတည်ရှိရာ)ကိုသိမ်းပိုက်ရေးအတွက် မီးအားပစ်ကူပေးရန်။ (ခ)အမှတ်(၁) စခန်းကိုရပြီးနောက်(၅၀၃)ရဲ့ခွဲ(၂)ခွဲဟာဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့(၃၀၃၅)တပ်ဖွဲ့ရဲ့ အရန်အဖြစ်ဆက်လက်ပါဝင်ရန်။
(၂)ရဲဘော်အိုက်လွန်းရဲ့(၃၀၃၅)တပ်ဖွဲ့ရဲ့ခြေလျင်တပ်ခွဲ(၄)ခွဲ(၅၇ မမနောက်ပွင့်အမြောက် ၃လက်၊ ၄၀မမဗဆူကာ ၁၂လက် ၊၇.၆၂မမကိုလိုနောဖ့်စက်လတ် ၁လက်၊၆၀မမမော်တာ ၃လက် တွဲဖက်လျှက်) ဟာတိုက်ပွဲစတင်တာနဲ့ တပြိုင်နက် မန်ခါစခန်းရဲ့အနောက်ဖက်ကနေပြီး ရန်သူအမှတ်(၉)နဲ့(၁၀)စခန်းတွေကို တက်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး နောက်ဆုံးအမှတ်(၇)တောင်ကုန်း(စစ်ကြောင်း ၁ ရုံး)ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေး (အဓိကတာဝန်)ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။
(၃) ရဲဘော်ဆမ်ဘလူးရဲ့(၅၀၁)တပ်ဖွဲ့မှခွဲ(၃)ခွဲ(၅၇မမ ၃လက်၊၄၀-မမဗဆူကာ ၁၂လက်၊၆၀မမ ၂လက် ၇.၆၂စက်လတ် ၁လက်အပါအ၀င်)ဟာတိုက်ပွဲစတင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထဲမှာ မန်ခါစခန်းရဲ့အရှေ့ဖက်မှ ချဉ်းကပ်ပြီး ရန်သူစစ်ကြောင်း(၂)ရုံးရဲ့ကာကင်းစခန်း(၃)နဲ့(၄)ကိုအချိန်တိုအတွင်း တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက် ရန်။မိမိတပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြားခြေလျှင်တပ်ခွဲတခွဲဖြင့် မန်ခါမြောက်ဖက်ရှိ ရန်သူရဲ့တပ်စိတ်စခန်း အမှတ်(၅)ကုန်းကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန်။၎င်းနောက်တပ်ခွဲ(၄)ခွဲစလုံး ရန်သူရဲ့အမှတ်(၆)ကုန်း(စစ်ကြောင်း ၂ရုံး) ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန်။
(၄)ရဲဘော်လီနင်မိန်ရဲ့(၄၀၄၈)တပ်ဖွဲ့ကတပ်ခွဲ(၂)ခွဲဟာ (၅၀၃)တပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုစတင်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ရန်သူကာကင်းတပ်စုရဲ့အမှတ်(၂)တောင်ကုန်းကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး(၅၀၁)တပ်ဖွဲ့ရဲ့နောက် ကြောကို လုံခြုံစွာကာကွယ်ပေးရန်။ ၎င်းနောက်(၅၀၁)တပ်ဖွဲ့ရဲ့အရံတပ်ဖွဲ့အဖြစ်စုဖွဲ့၍ ရှေ့တန်းစစ် ဦးစီးအဖွဲ့၏ညွှန်ကြားမှုကိုစောင့်ဆိုင်းရန်။
(၅)(၅၀၃)တပ်ဖွဲ့ရဲ့ခွဲ(၄)နဲ့ခရိုင်တပ်မှတပ်ခွဲတခွဲဟာ မန်ခါတပ်စခန်းရဲ့အနောက်မြောက်ဖက် အမှတ်(၅)နဲ့ အမှတ်(၁၀) တောင်ကုန်းအကြားရှိ ရန်သူဆုတ်လမ်းကို ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ရန်။
(၇)(၄၀၄၈)တပ်ဖွဲ့ရဲ့ခွဲတခွဲနဲ့ခရိုင်တပ်ရဲ့အားဖြည့်တပ်စုတစုတို့ဟာ ၈၂ မမစိန်ပြောင်း(၁)လက် ကိုလိုနော့်စက်လတ်(၁)လက်တွဲဖက်ပြီး မန်ခူးနဲ့မန်မောက်ကြားမှာ အကျိုးရှိတဲ့မြေအနေအထားကို ရွေးချယ် ဆုပ်ကိုင်ပြီးရန်သူတပ်ကူကိုတားဆီးဖြတ်တောက်ထားရန်နဲ့ မန်ခူးရဲ့ ၇၅ မမ အမြောက်ကိုဖိထားပြီး (၃၀၃၅)တပ်ဖွဲ့ရဲ့နောက်ရန်ကိုလျော့နဲစေရန်။
(၈)ခရိုင်တပ်ရဲ့ခြေလျင်တပ်ခွဲ(၂)ခွဲဟာ ၇၅မမ အမြောက်တလက်၊၈၂ မမ စိန်ပြောင်းတလက၊် ၀.၅ လေယာဉ်ပစ်စက်ကြီးတလက်တို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးမန်ကန်-မန်ပုံရှိရန်သူရဲ့အထောက်အကူစခန်းများရှိအမြောက် များကိုဖိနှိပ်ထိမ်းချုပ်ထားရန်။
(၉)မိမိတို့ရဲ့အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်မဟာ(၄၁၇)လက်နက်ကြီးတပ်ခွဲတို့ကို ပူးပေါင်းပြီး မိမိတို့ရဲ့မီးအားပစ်ကူအဖွဲ့(၂)ဖွဲ့အဖြစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။မီးအားအဖွဲ့(၁)မှာ ၁၂၀မမ စိန်ပြောင်းကြီး(၂)လက၊် ၇၅ မမနောက်ပွင့်(၁)လက် ၊၀.၅စက်သေနတ်ကြီး(၂)လက်ပါဝင်ပြီး တိုက်ပွဲ စစချင်း ရန်သူရဲ့အဓိကစစ်ကြောင်းကုန်း ညွှန်ကြားရေးစခန်းကုန်း(၆)နဲ့(၇)ကို အဆက်မပြတ်ပွဲပြီးသည် အထိ ဖိအားပေးပစ်ခတ်ရန်။ မီးအားပစ်ကူအဖွဲ့(၂)ဟာ ၇၅ မမနောက်ပွင့်(၃)လက် ၊၈၂ မမစိန်ပြောင်း(၃)လက်၊၀.၅ စက် ကြီး(၃)လက်တို့ပါဝင်ပြီး (၅၀၃)တပ်ဖွဲ့ရဲ့ အမှတ်(၁)တောင်ကို သိမ်းပိုက်ရေးအတွက် ဖိအားပစ်ခတ်စေပြီး အမှတ်(၁)တောင်ကုန်းကို (၅၀၃)တပ်ဖွဲ့မှ သိမ်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက် အမှတ်(၁)တောင်ကုန်းပေါ်သို့ အမြန်ရွှေ့ပြောင်းစေပြီး (၅၀၁)၊ (၃၀၃၅)တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ အမှတ်(၆)နဲ့(၇) တောင်ကုန်းသိမ်းပိုက်ရေးအတွက် ဆက်လက်ပစ်ခတ်ပေးရန်–တို့ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၀)တိုက်ပွဲဝင်တပ်ဖွဲ့အားလုံး(၂၉)ရက်ညအမှောင်ထုကိုအကာအကွယ်ယူပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာအသီးသီးကို လျှို့ဝှက်လုံခြုံစွာနဲ့ထွက်ခွာကြပြီး ထိုးစစ်စတင်ရန်သတ်မှတ်ထားတဲ့(စ)မှတ်များသို့(၃၀) ရက်နေ့ နံနက်၀၅.၀၀နာရီမတိုင်ခင်ရောက်ရှိနေရာယူထားရန်။
(၁၂)တိုက်ပွဲအခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့် မူလစီမံကိန်းမှာ မပါဝင်တဲ့ (၄၀၄၈)တပ်ဖွဲ့တဖွဲ့လုံးကိုပါ တခြားတပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူ မန်ရှန်စစ်မျက်နှာသို့ ခေါ်ယူလာရန် နောက်တန်းသို့ အကြောင်းကြားရန် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၀-ဇန်န၀ါရီ-၂၅-၂၆ နေ့များမှာ နောက်တန်းမှာချန်ထားခဲ့တဲ့ (၅၀၁)(၅၀၃)(၃၀၃၅)တပ်ရင်း များနဲ့ စစ်ဒေသအမြောက်တပ်တပ်ဖွဲ့အားလုံး ရှေ့တန်းမန်ရှန်မြို့နယ်ရှိ သက်ဆိုင်ရာစုရပ်များသို့ ရောက်ရှိ လာတယ်။၂၇ ရက်နေ့မှာထပ်မံခေါ်ယူထားတဲ့(၄၀၄၈)တပ်ဖွဲ့ဟာလဲရောက်ရှိလာတယ်။
၂၉ရက်နံနက်ပိုင်းမှာမိမိတို့တိုက်ပွဲစီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ၉၀ ရာနှုံးကျော်ရောက်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိတို့ရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့ကမူလသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ၃၀ ရက်နေ့နံနက်မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
၂၈ ရက်နံနက်မှာတိုက်ပွဲဝင်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးကိုလက်နက်ခဲယမ်း စစ်ဆေး-ဖြည့်တင်းခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။
၂၈ ရက်ညနေခင်းမှာ ပါဝင်ကြမဲ့တပ်ဖွဲ့များရဲ့တပ်စုအထက်အဆင့်ကေဒါများအားလုံးကို လွယ်ပန်လုံစခန်းကြီးပေါ်မှာ စုစည်းပြီး မိမိတို့ရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့စစ်ဆင်ရေးဌာနခွဲမှ သဲမြေပုံကြမ်းဖြင့်၎င်း၊ လက်တွေ့မြေအနေအထားတိုက်ပွဲဂွင်ကို၎င်း၊ ရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြတယ်။ဦးဇော်မှိုင်းနဲ့ဦးဖုန်ကြားဖူးက တိုက်ပွဲစီမံကိန်းကိုရှင်းလင်းပြပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့မှတပ်မှူးများနဲ့အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးကြတယ်။
၂၉ ရက်နေ့ညနေပိုင်း မန်ပတ်ရွာဘေးက ကွက်လပ်ကြီးမှာတိုက်ပွဲဝင်တပ်ဖွဲ့များကို ရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့မှ နိုင်ငံရေးမှူးရဲဘော်အုန်းကြည်ကနိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ပိုင်းဖြတ်ချက်စတဲ့ တပ်ထွက်မိန့်ခွန်းပေး ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှူးရဲ့အားပါလှတဲ့တပ်ထွက်မိန့်ခွန်းပေးနေတဲ့အလွန်တက်ကြွဖွယ်မြင်ကွင်းဟာ မိမိတသက်မှာမေ့လောက်စရာမရှိအောင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။
၂၉ ရက်ညနေ ၁၈.၀၀နာရီရောက်ချိန်မှာမိမိတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့များမန်ပတ်မှ အနောက်ဖက်တောတန်းများ ဆီသို့ချီတက်ဝင်ရောက်သွားကြပါတယ်။ အလားတူ ဖြတ်တောက်ရေး-ပိတ်ဆို့ရေး-အရံတပ်စုဖွဲ့မှု တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်မဲ့မိမိတို့ရဲ့(၄၀၄၈) တပ်ဖွဲ့၊ခရိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်သူစစ်များကို ၀တောင်ခရိုင်အတွင်းရေးမှူး ရဲဘော်တာရှီဂန်က တပ်ထွက်မိန့်ခွန်းပေး-းနိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုပြုလုပ်ပြီးတာဝန်ကျရာ စုရပ်အသီးသီးသို့ ထွက်သွားကြတယ်။
မိမိတို့ရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့မှာလဲ တိုက်ပွဲကို အနီးကပ်ကွပ်ကဲရန်အတွက် ဖါကျပ် ရွာသို့ ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။
မိမိတို့ရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့ဟာဇန်န၀ါရီ(၃၀)ရက်နံနက်၀၄.၃၀မှာမိမိတို့အဖွဲ့ရဲ့စုရပ် ဖါကျပ် ရွာဘေးရှိကျောက်တောင်ကုန်းသို့ရောက်ရှိပြီးရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့ရဲ့ကွပ်ကဲမှုကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ နံနက် ၀၅.၃၀မှာတပ်ဖွဲ့အသီးသီးဟာ(အမြောက်မီးအားအဖွဲ့ ၂ မှလွဲ၍)သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်စု ရပ်အသီးသီးသို့ ရောက်ရှိခဲ့တယ်။အမြောက်တပ်မီးအားအဖွဲ့(၂)ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာစုရပ်သို့ နောက်ကျ ရောက်ရှိမှုကြောင့်၎င်း၊ မီးအားအဖွဲ့(၂)ရဲ့ပစ်ခတ်ရန်ပြင်ဆင်မှုနှောင့်နှေးမှုများကြောင့်၎င်း၊ တိုက်ပွဲကို သတ်မှတ်ချိန်ထက် ၀၀.၃၅မိနစ်နောက်ကျပြီးမှ စတင်နိုင်ခဲ့တယ်။
နံနက် ၀၆.၃၅မှာအမြောက်တပ်ပစ်ကူအဖွဲ့(၁)ရဲ့(၁၂၀)မမစိန်ပြောင်းကြီး(၂)လက်ရဲ့စတင်ပစ် ခတ်မှုနဲ့တိုက်ပွဲကြီးကိုစတင်လိုက်ပါတော့တယ်။သံလွင် အရှေ့ခြမ်း တန့်ယန်းမြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ဖက် မန်ခူး-မန်ခါဒေသတခုလုံးမိမိတို့ရဲ့အမြောက်ပစ်သံများနဲ့ဟိန်းဟိန်းညံနေပါတော့တယ်။
တိုက်ပွဲစတင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထဲမှာ (၃၀၃၅)တပ်ဖွဲ့နဲ့(၅၀၁)တပ်ဖွဲ့တို့ဟာရန်သူအမှတ်(၄)(၁၀) (၉)(၅)တောင်ကုန်းများကိုမိမိတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပင်ကိုယ်မီးအားအောက်မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြ တယ်။နံနက် ၀၈.၂၅ မှာအထက်ပါရန်သူစခန်းကုန်းအားလုံးကိုအောင်မြင်စွာ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ ပြီး ရန်သူအဓိကကုန်း(၆)နဲ့(၇)များကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့ချဉ်းကပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။
ရန်သူစစ်ကြောင်းရုံး ၂ရုံးရှိတဲ့အမှတ်(၆)နဲ့(၇)ကုန်းပေါ်ရှိရန်သူများဟာ အမြောက်တပ် တပ်ဖွဲ့(၁) ရဲ့(၁၂၀)မမစိန်ပြောင်းကြီး(၂)လက်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုအပါလက်နက်ကြီးများရဲ့ထိရောက်မှုရှိတဲ့မီးအားပြင်း ထန်မှုကြောင့် ဖရိုဖရဲဖြစ်ကာ စစ်မျက်နှာတခုလုံးဆက်သွယ်ညွှန်ကြားနိုင်မှုပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်။ ရန်သူတပ်ရင်းဟာ တိုင်းတပ်ရင်းတရင်းဖြစ်ပြီး(၁၂၀)မမစိန်ပြောင်းကြီးများရဲ့ပစ်ခတ်ခံရမှု အတွေ့အကြုံ
မရှိတာကတကြောင်း၊ မိမိတို့ပစ်ခတ်မှုရဲ့တိကျအားကောင်းမှုကြောင့်တကြောင်း၊ စခန်းအလိုက် ခံစစ် ခုခံတိုက်ခိုက်တာနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့မှုကို ဖေါက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတာကလွဲယင်တခုလုံးအပြန်ပြန်အလှန်လှန်အကူအညီပေးနိုင်ခြင်း၊လက်နက်ပစ်ကူပေးခြင်း၊စတဲ့စီမံညွှန်ကြားမှုတခုလုံးကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုဆိုက်ရောက်သွားပါတော့တယ်။
မိမိတို့ရဲ့(၅၀၃)တပ်ညွှန်ကြားရေးတပ်ဖွဲ့ဟာ ရန်သူအမှတ်(၁)ကုန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာ အမှားကြီးတခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်။အမှတ်(၁)ကုန်းဟာ မိမိတိုံနဲ့အနီးဆုံးကုန်းစခန်းဖြစ်တဲ့ အတွက်ရန်သူတပ်ခွဲမှူးညိုဝင်းမြင့်ဟာ ကာကင်းတပ်စိတ်တွေကို တောင်ကုန်းအောက်ခြေအထိထုတ်ထားပြီး တချို့ကိုဗြောင်ဖေါ်ထားပြီး တချို့ကိုလျှိုဝှက်ကင်းပုံး ၀ပ်ထားစေတယ်။တိုက်ပွဲစတင်တာနဲ့ ခြေ
လျင်တပ်ခြင်း စတင်ထိတွေ့တာနဲ့ တပြိုင်နက်ရန်သူဟာ(၁၀)မိနစ်ခန့် ထိတွေ့မှုယူပြီး အဆင့်ဆင့် ဆုတ်ခွာကာ ပင်မစခန်းကုန်းပေါ်ရှိ အင်အား များနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ခံစစ်ဆင်ခဲ့တယ်။
(၅၀၃)တပ်ညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့ဟာ ရန်သူ၇ဲ့ကာကင်းတွေအမြန်ဆုတ်ခွာမှုကို မှားယွင်းစွာတွက် ချက်မိပြီးအမြောက်တပ်မီးအားအဖွဲ့(၂)ရဲ့မီးအားကိုမီးကျည်ပစ်ပြီးရပ်ခိုင်းပါတော့တယ်။အမှတ်(၂)မီး အားအဖွဲ့ဟာမီးကျည်ကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက် မူလစီမံကိန်းအတိုင်း အမြောက်ပစ်ရပ်ပြီး အမှတ်(၁)ကုန်း ပေါ်သို့ရွှေ့ပြောင်းရန် လုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်။(၅၀၃)တပ်ဖွဲ့ဟာ အမြောက်တပ်မီးအားမပါဘဲဆက်
လက်တက်ခဲ့ရာ အဓိကစခန်းမှာ ညိုဝင်းမြင့်တပ်ခွဲရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ စနစ်ကျတဲ့ ခုခံမှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ရှေ့ ကိုဆက်ပြီး မတက်နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေအောက်မှာ (၅၀၃)တပ်ဖွဲ့မှမီးအားပစ်ကူပေး ဖို့ပြန်လည်တောင်းဆိုလာခြဲ့ပန်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာ အမြောက်တပ်မီးအားအဖွဲ့(၂)ဟာစီမံကိန်းအတိုင်း ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့လမ်းခုလတ်မှာဖြစ်နေတယ်။အမှတ်(၂)တပ်ဖွဲ့ဟာ ပစ်ခတ်မှုတောင်းဆိုချက်ရရခြင်း ရောက်ရှိနေရာမှ ပစ်ကူပေးဖို့ပြင်ဆင်ပြီး ဆက်လက်ပစ်ခတ်ပေးခဲ့ရတယ်။
(၅၀၃)တပ်ဖွဲ့ဟာမိနစ်(၄၀)ခန့်မီးအားပစ်ကူမပါဘဲတိုက်ခိုက်နေခဲ့ရတယ်။အမှတ်(၂)တပ်ဖွဲ့မီးအား ပြန်လည်ပစ်ခတ်နိုင်ပြီးနောက် အမှတ်(၁)တောင်ကုန်းကို နံနက်၀၈.၅၅နာရီ(သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန် ထက်တနာရီနီးပါးနောက်ကျပြီးမှ)ကျမှ အကျအဆုံးများနဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိနိုင်ခဲ့တယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းဒဏ် ရာအနာတရများတဲ့အတွက် သတ်မှတ်စီမံကိန်းအတိုင်း(၃၀၃၅)တပ်ဖွဲ့ရဲ့အရံအဖြစ်တပ်ခွဲ(၂)ခွဲမပေး နိုင်တော့ဘဲ အင်အားဖြည့်(၁)ခွဲသာပေးပို့နိုင်ခဲ့တယ်။
နံနက်၀၈.၂၅ နာရီမှာ(၅၀၁)တပ်ဖွဲ့နဲ့(၃၀၃၅)တပ်ဖွဲ့တို့ဟာမိမိတို့ဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ အမှတ်(၆) နဲ့(၇)ကုန်းများကိုအမြောက်တပ်မီးအားအဖွဲ့(၁)မီးအားအောက်မှာသာဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ရတယ်။
မူလစီမံကိန်းအရဖြစ်တဲ့မီးအား(၂)အဖွဲ့ရဲ့မီးအားပစ်ကူမှုကိုမရရှိခဲ့ဘူး။(၅၀၁)တပ်ဖွဲ့ရဲ့ခွဲ(၆)ညွှန်ကြားရေးမှူး ညီတုံး ဦးစီးတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာ အရှေ့တောင်ဖက်မှဝင်ရောက်ပြီး အကြိမ်ကြိမ်ရဲဝန့်စွာ ကျား တက်ထိုးပြီး စစ်ကြောင်းရုံးစခန်းထဲကို ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။
အလားတူ(၃၀၃၅)တပ်ဖွဲ့ရဲ့ခွဲ(၄)တပ်ခွဲမှူး စံခွန်းရဲ့ဦးစီးမှုအောက်မှာစစ်ကြောင်း(၁)ရုံးရဲ့ ခံစစ်စခန်းကိုအရှေ့တောင်ဖက်နဲ့အရှေ့ဖက်မှတဟုန်ထိုး ကျားတက်ထိုးခဲ့ပြီးသိမ်းပိုက်ရရှိနိုင်ခဲ့တယ်။
နံနက်၀၈.၂၅ မှ၀၉.၀၀အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြပြီးနောက် ၀၉.၀၀မှာစစ်မြေပြင်ရှိစခန်း အားလုံးကို သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။၀၉.၂၀လောက်မှာတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အသီးသီးကရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့သို့သတင်းပို့ချက်များအရ စစ်မြေပြင်မှာရန်သူစုစုပေါင်း(၅၇)သေပြီး သုံ့ပန်း(၄၁)ဖမ်းမိကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒါဟာတိုက်ပွဲဂွင်ရှိ ရန်သူအင်အားရဲ့(၃၀) ရာနှုံးမရှိသေးပါ။ ဒီအခြေအနေမှာ ရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့က ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့ရန်သူများကို စီမံကိန်းအတိုင်းတိတိကျကျ ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက် လိုက်လံတိုက်ခိုက်ဖို့ ထပ်မံအမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တပ်ဖွဲ့များဟာရရှိထားတဲ့စခန်းတွေမှာအင်အားအချို့ဖြင့်ထိမ်းသိမ်းခံစစ်ပြင်ဆင်စေပြီး ကျန်အင်အားများဖြင့်(၈)စတုရန်းကီလိုမီတာကျယ်တဲ့ စစ်မြေပြင်တခုလုံး တောနင်းရှာဖွေ ပိတ်ဆို့ချေမှုန်းရေးတာဝန်ကို မနားတမ်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
ညနေ၁၅.၀၀နာရီလောက်မှာ တပ်ဖွဲ့အသီးသီးမှလိုက်လံဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ချေမှုန်းခြင်း အစီရင်ခံချက်အရ တိုက်ပွဲကြီးရဲ့အောင်သီးအောင်နှံကို အောင်မြင်စွာတိုးချဲ့နိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
(၃၀)ရက်နေ့၁၅.၀၀ အစီရင်ခံချက်များအရ ရန်သူစုစုပေါင်းသေ–၁၁၂ ယောက်။
(၃၀၃၅)တပ်ဖွဲ့ဖက်မှ ရန်သူသေ–၃၇ ယောက်
(၅၀၁) ။ ။ ။ –၃၉ ။
(၅၀၃) ။ ။ ။ –၁၅ ။
(ခရိုင်တပ်) ။ ။ — ၂၀ ။
(၄၀၄၈) ။ ။ — ၁ ။
၎င်းတို့အနက် ရန်သူခွဲမှူးဗိုလ်ကြီး(၁)ယောက်၊ စုမှူးဗိုလ် (၁) ။ ဒုဗိုလ် (၁) ။ ၊ ပါဝင်တယ်။
စုစုပေါင်းဖမ်းမိ သုံ့ပန်း –(၁၂၁) ယောက်။
(၃၀၃၅)တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းမိ ၃၂ ယောက်
(၅၀၁) ။ ။ ၇၂ ။
(ခရိုင်တပ်)။ ။ ၁၅ ။
(၅၀၃) ။ ။ ၂ ။ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးရမိသူတွေထဲမှာ ရှေ့တန်း ခလရ(၃၃)တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီးသူရစိုးမင်း၊
။ ဒုဗိုလ်တင်ထွန်းကျော် အပါ အရာရှိ(၆)ဦး ပါဝင်တယ်။
ဆေး အရာခံဗိုလ်လှသောင်းအပါအကြပ်(၂၈)ဦးပါဝင်တယ်။စစ်ကြောင်း(၂) မှူးဗိုလ်မှူးစန်းမောင်နဲ့ဒဏ်ရာသမားများအပါ(၇၀)နီးပါးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။
ရရှိထားတဲ့အချက်အလက်များအရ ရန်သူချေမှုန်း ၂၆၈-ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။(ရန်သူထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်များအတွင်း-သေဆုံး-၇၀။ဒဏ်ရာ-၄၂။ပျောက်ဆုံး-၁၁၂–စုစု ၂၂၄ ယောက်လို့ ဖေါ်ပြထားတယ်။)
စက်လတ်—MG-၄၂–၂–လက်၊အမြောက်စုံ —၁၈–လက်(၇၅ မမ ၂ လက်၊၃လက်မစိန်ပြောင်း -၂-လက်၊၂လက်မစိန်ပြောင်း-၅-လက်၊M-၄၀-လက်ထောက်မော်တာ-၅-လက်၊၉၀ မမ-၅-လက်)
ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းစက်—၅-လုံး။စကားပြောစက်–၁-လုံး။အမြောက်ဆန်မျိုးစုံ–၃၀၀ ကျော်။ကျည်မျိုးစုံ-၂-သိန်းကျော်။ လက်ပစ်ဗုံး အလုံး ၄၀။ ။မိုင်း ၁၀၀ ကျော်။တို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်ရန်သူအထောက်အကူအရန်တပ်ဖွဲ့များဟာအလစ် အငိုက်မိခံရပြီး မိမိတို့စီမံကိန်းအတိုင်း ထိမ်းချုပ်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အတွက် လွယ်အင် ရှိ ၂၅ မမ အမြောက်များမှလွှဲ၍ အခြားမှ အကူအညီပစ်ခတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ လွယ်အင်ရှိ ၂၅မမအမြောက်များမှာလဲ စစ်မြေပြင်(၂)ဖက်တပ်များရဲ့ အခြေအနေမှန်ကို မဆုပ်ကိုင်နိုင်တာကြောင့် ထိထိရောက်ရောက်ပစ်ကူပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ရမခ တိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်လှဦးကလေကြောင်းပစ်ကူအတွက် တိုက်လေယဉ်(၂)စီး၊ဗုံးကြဲလေယာဉ်င်္(၂)စီးကို နံနက် ၁၁.၀၀အချိန်မှာစစ်မြေပြင်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။စစ်မြေပြင်ကကျယ်ပြန့်ပြီး လက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်သံကြိုးကြားကြိုးကြား ရှိနေသေးပြီး (၂)ဖက်တပ်ဖွဲ့အခြေအနေကို ခိုင်ခိုင်မာမာမသိနိုင်တဲ့အတွက် လေကြောင်းမှ အဓိကစစ်မြေပြင်ကို တိုက်ရိုက်ပစ်ခတ်ကူညီနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အရပ်သားကျေးရွာများနဲ့ မိမိတို့မန်ရှန်မြို့နယ်ရုံးကို ပစ်ခတ်ဗုံးကြဲမှုအကြိမ်အချို့ လုပ်သွားပါတယ်။
ရမခ ဒုတိုင်းမှူးနဲ့အဖွဲ့ကိုတန့်ယန်းသို့ချက်ချင်းစေလွှတ်ပြီးတန့်ယန်းရှိအမှတ်(၂)စစ်ဗျူဟာကို လွယ်အင်သို့ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချစေပြီးနောက် တပ်မ(၆၆)ရဲ့နဗဟ(၆၆၁)နဲ့ ခလရ(၇၅)၊(၈၀)တပ်ရင်း များကိုလွယ်အင်နဲ့ တာကော်အက် ကြားမှာစုစည်းထားပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန် (၃)နာရီကျော်ကာလမှာ ရန်သူအထောက်အကူတပ်စခန်းများဖြစ်တဲ့ မန်ကန် -ကံ့ကော်-သံခမောက်စခန်းရှိရန်သူများဟာ မိမိတို့တပ်ဖွဲ့များရဲ့ထိမ်းချုပ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်မြေပြင်ကိုအကူအညီမပေးနိုင်ဘဲ ၎င်းတို့ခံစစ်စခန်းများကိုပါအတိုက်ခံရမှာ ဟုယူဆပြီး ၎င်းတို့ခံစစ်စခန်းများမှာသာစုစည်းနေကြပါတယ်။
ထို့ကြောင့်ရန်သူ ခလရ(၃၃)ရဲ့စစ်ကြောင်း(၁)(၂)နဲ့တပ်ခွဲ(၄)ခွဲဟာ မြေပြင်-ဝေဟင် အကူအညီမဲ့စွာ မိမိတို့တပ်ဖွဲ့များရဲ့ဝိုင်းဝန်းချေမှုန်းခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။
ရန်သူစစ်ဆင်ရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီနဲ့ ရမခတိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်လှဦးတို့ဟာ ခလရ(၃၃)ချေမှုန်း ခံရတဲ့အတွက်တုန့်ပြန်လက်စားချေဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ရမခ-ဒုတိုင်းမှူးကိုတန့်ယန်းမှကွပ်ကဲစေပြီး နယ်လှည့် စဗဟအမှတ်(၂)လွယ်အင်မှာ ခလရ(၆၉)-(၆၇)-၂ရင်းဖြင့်၎င်း၊တပ်မ(၆၆)၏နဗဟ(၆၆၁)နဲ့ ခလရ(၈၀)(၇၅)-၂ ရင်းစုစု(၂)ဗျူဟာ၊(၄)ရင်းတို့ဖြင့်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့သာလွန်တဲ့အင်အားစုကြီးဖြင့်မထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာအချိန်တိုအတွင်းလက်နက်ကြီး မီးအားအများမပြားဖြင့်တပ်ရင်းလိုက်ချေမှုန်းရေးလုပ်ဆောင်သွားနိုင်မှုကြောင့်အလွန်ခြောက်ခြားတုန်လှုပ်သွားပြီးမိမိတို့၏တပ်ဖွဲ့ကြီးများမြစ်အနောက်ဖက်ကမ်းအထိတက်ရောက်တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်ဟုယူဆပြီး လက်စားချေရန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များကိုခံစစ်အတွက်ပြင်ဆင်စုစည်းပြောင်းလဲခဲ့တယ်။
မိမိတို့ရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဝင်တပ်ဖွဲ့များမန်ရှန်ဒေသတွင်(၂)ရက်ခန့်အနားယူပြီးတိုက်ပွဲ နိဂုံးချုပ်များလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရဖေဖေါ်ဝါရီ(၃)ရက်နေ့မှာ မော်ဖါစစ်ဆင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။
(၁)သာလွန်တဲ့တပ်အင်အားကိုစုစည်းပြီးဝိုင်းပတ်ချေမှုန်းစစ်ဆင်တာဟာရန်သူရဲ့ထိုးစစ်ကိုရိုက်ချိုးတဲ့ အကျိုးရှိတဲ့နည်းနာတခုဖြစ်တယ်။တခုလုံးအခြေအနေအရရန်သူကအင်အားသာလွန်ဲပီး မိမိတို့ကနှိုင်း ယှဉ်ချက်အရအင်အားချိနဲ့နေသေးတဲ့လက်ရှိအခြေအနေအောက်မှာယာယီအားဖြင့်-ရန်တက်-ငါဆုတ် နည်းနာကိုကျင့်သုံးပြီးမိမိအင်အားကိုထိမ်းသိမ်းထားပြီးအခါအခွင့်ကောင်းကိုစောင့်ပြီးရန်သူအားချေမှုန်းတဲ့လမ်းညွှန်မှုဟာလုံးဝမှန်ကန်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ဦးမှုမဲ့နေခြင်းမှလက်ဦးမှုရှိခြင်းသို့ပြောင်းလဲစေတဲ့ ရန်သူကိုအထိနာစေတဲ့ မိမိတို့တပ်နဲ့ပြည်သူတွေကို စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေတဲ့ထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေး နည်းနာဖြစ်တယ်။ ဒီအချက်မှန်ကန်ကြောင်းကိုမန်ခါ တိုက်ပွဲရဲ့အောင်ပွဲများကသက်သေပြလျှက်ရှိပါတယ်။
(၂)အချိန်တိုတိုနဲ့အမြန်အဆုံးသတ်တဲ့စစ်ဆင်ရေးနည်းနာဟာယခုလိုတိုက်ပွဲမျိုးမှာအလွန်လိုအပ်ပြီးအလွန်ထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းနာဖြစ်တယ်။ မိမိတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့များဟာ မမျှော်လင့်တဲ့အချိန်မမျှော်လင့်တဲ့နေရာမှာ မမျှော်လင့်နိုင်တဲ့အင်အား ကိုစုစည်းပြီးပြင်ဆင်မှုအားနည်းတဲ့မန်ခူး-မန်ခါရှိရန်သူများကို အမြန်အဆုံးသတ်တဲ့နည်းနာနဲ့တိုက်ခိုက် ချေမှုန်းခဲ့တယ်။ စစ်မြေပြင်မှာ သေနတ်သံစထွက်ပြီး တိုတောင်းတဲ့အချိန်(၂နာရီခွဲ)အတွင်း လက်နက်ကြီးသံ လုံးဝရပ်သွားအောင် အမြန်ထီုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ထပ်အချိန်တို(၂-၃နာရီ)အတွင်း စစ်မြေပြင် ရှင်းလင်းခြင်း၊ ထွက်ပြေးရန်သူလိုက်လံဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့ သိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့စခန်းများကိုယာယီထိမ်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့တယ်။ တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်အဆုံးသတ်နိုင်မှုကြောင့် ရန်သူလေကြောင်းအကူနဲ့ အဝေးပစ်လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေဟာ တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းလုံးဝအသုံးမ၀င်ဖြစ်ခဲ့ရ တယ်။ ယခုလိုအမြန်အဆုံးသတ်တဲ့နည်းနာဟာ မန်ခူးမန်ခါ တိုက်ပွဲကြီးရဲ့ပြတ်ပြတ်သားသားအောင်နိုင်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းတရားတရပ်ဖြစ်ပါတော့တယ်။
(၃)လျှို့ဝှက်လုံခြုံမှုကိုတိတိကျကျထိမ်းချုပ်တဲ့လုပ်ဟန်၊မိမိတို့ရဲ့ရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့ဟာ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ လူအနည်းငယ်နဲ့ရှေ့တန်းရဲ့အခိုင်အမာအခြေအနေကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့တယ်။ မိမိရဲ့တိုက်ပွဲဝင်မဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုမန်ရှန်ဒေသထဲသို့လျှို့ဝှက်လုံခြုံစွာဖြင့်ချီတက်လာစေပြီးရန်သူရှေ့တန်းစခန်းများနဲ့(၂)ကီလိုကျော်သာ ဝေးတဲ့ဒေသထဲမှာ လုံခြုံမှုရှိစွာနေရာယူထားနိုင်ခဲ့တယ်။ သေနတ်သံမထွက်မှီ(၃) ရက်တာ အချိန်အတော်အတွင်းတိုက်ခိုက်ရေးအင်အား(၂၀၀၀)ကျော်စုရုံးရောက်ရှိနေမှုနဲ့လှုပ်ရှားမှု သတင်းတွေကို လုံးဝပိတ်ဆို့ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုသတင်းလုံခြုံစွာထားနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ခူး-မန်ခါတိုက်ပွဲကြီး အောင်မြင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတရပ်လဲဖြစ်ပါတယ်။
(၄)ရန်သူအြုခအနေအချက်အလက်တွေကိုတိကျမှန်ကန်စွာဆုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း။မိမိတို့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရန်သူအခြေအနေတွေကိုအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ထောက်လှမ်းခဲ့ကြ၊အပြန်ပြန်အလှန်လှန် သုံးသပ်လေ့လာခဲ့ကြတယ်။ ဒေသခံအစိုးရ၊ဒေသခံပြည်သူနဲ့ပြည်သူစစ်များထံမှရန်သူအခြေအနေများကိုအကြိမ်ကြိမ်နားထောင်ခဲ့ကြတယ်။တိုက်ပွဲဝင်မဲ့တပ်စုအထက်ကေဒါတွေဟာအကြိမ်ကြိမ်မတူတဲ့ဖက်အသီးသီးကမြေအနေအထားကိုထောက်လှမ်းခဲ့ကြတယ်။သဲမြေပုံများပြုလုပ်ပြီးလေ့လာသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီိလိုလေ့လာမှုတွေနာယူမှုတွေအောက်မှာ ရန်သူရဲ့အင်အား ၊တည်နေရာ၊ပစ်ခတ်မှုမီးအား၊ စတဲ့ရန်သူအချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာဆုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒိနောက်မိမိတို့ရဲ့စစ်ရေးခေါင်းဆောင်
များဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချနိုင်ခဲ့တယ်။ အထက်မှအောက်အထိ စစ်ရေးဒီမိုကရေစီကို အပြည့်အ၀ထွန်းကားစေပြီး တိုက်နည်းအမျိုးမျိုးကိုအပြန်ပြန်အလှန်သုံုး့းသပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒိနောက်နှိုင်းယှဉ်ချက်အရလက်တွေ့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့တိုက်နည်းဗျူဟာနဲ့တိုက်ပွဲစီမံကိန်းကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်။
(၅)အားကောင်းလှတဲ့နိုင်ငံရေးလှုံဆော်မှုလုပ်ဟန်။ဇန်န၀ါရီ(၂၇)ရက်နံနက်မှာမိမိတို့ရှေ့တန်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များကတိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့တပ်စုအထက်ကေဒါတွေကို ဒီတကြိမ်တိုက်ပွဲရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ၊စိတ်ပိုင်းဖြတ်ချက်တွေကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်။ တဆက်ထဲမှာလဲ-မဆလ-စစ်အစိုးရရဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတွေအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကြီးမားလှတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ၊ ဖိနှိပ်မှုတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်။ ဒိနောက် တိုတိုတုတ် တုတ်နဲ့အားကောင်းလှတဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေကို လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဇန်န၀ါရီ(၂၉)ရက်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်တပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုတပ်ဖွဲ့အလိုက်ခေါင်းဆောင်များက တပ်ထွက်မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားခြင်းဖြင့်တိုက်ပွဲမ၀င်မီနောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ တယ်။ ဒီလိုနိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှု့တွေဟာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့တိုက်စိတ်ခိုက်စိတ်များကို မြင့်မားစေခဲ့ပြီး အောင်ပွဲတွေကို ရစေနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတရပ်လဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
(၆)ပြည်သူ့စစ်ပွဲဟာရန်သူကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့ပြဒါးရှင်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ယခုတိုက်ပွဲကြီးမှာပြည်သူစစ် (၅၀၀)နီးပါးကို ဒေသကမိမိတို့ကိုတွဲဖက်ပေးပြီး တိုက်ရိုက်တိုက်ပွဲထဲမှာပါဝင်စေခဲ့တယ်။၅၀၁ တပ်ဖွဲ့ ကို (၁၀၀)၊ ၃၀၃၅ တပ်ဖွဲ့ကို (၁၀၀)၊ လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ကို(၁၀၀)၊ခရိုင်တပ်ကို(၂၀၀)စသဖြင့်တွဲဖက် ပေးခဲ့တယ်။ထောင်အချို့ရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုဟာ ရိက္ခာ ခဲယမ်းမီးကျောက်နဲ့ဒဏ်ရာရလူနာတွေ ကိုသယ်ယူပေးခြင်းဖြင့် မိမိတို့ရဲ့ အရန်အင်အားကိုဖြည့်စွက်ပေးခဲ့တယ်။ ထို့အပြင်စစ်ရေးတာဝန်ဖြစ်တဲ့ ရန်သူအခြေအနေ သတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့များ လုံခြုံချောမွေ့စွာတိုက်ပွဲစုရပ်များသို့ အောင်မြင်စွာပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
တဖက်မှာလဲမိမိတို့တပ်ဖွဲ့များရဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာထိမ်းသိမ်းနိုင်ခြင်းကြောင့် ရန်သူများအတွက် မျက်စိပိတ်-နားပိတ်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုအချက်အလက်တွေကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲကြီးရဲ့ အောင်ပွဲဟာ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ အင်တိုက်အားတ်ိုက်ကုညီပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ခွဲခြားလို့မရနိုင်ပါ။
(၇)သေမှာမကြောက်ဆင်းရဲပင်ပန်းမှာမကြောက်တဲ့တိုက်ပွဲဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့လုပ်ဟန်။မိမိတို့ရဲ့အဓိကတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူ`မင်းရန်အောင်´စစ်ဆင်ရေးစတင်တဲ့ ၁၉၇၉ခုနိုဝင်ဘာလကစပြီး (၂)လကျော် ကာလအတွင်း စတုရန်း ကီလိုမီတာ(၂၀၀) ကျော်ရှိတဲ့တို့်က်ပွဲဂွင်ထဲမှာတတောဝင်တတောင်တက်မနား တမ်း ချီတက် လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်။ ရန်သူကိုပြတ်ပြတ်သားသားချေမှုန်းလိုစိတ်နဲ့ ခဲယမ်းမီးကျောက်အပြည့်အစုံကို ထမ်းပြီးတောင်မှမြောက်သို့ အရှေ့မှအနောက်သို့(၂)လကျော်အချိန်အတွင်း လွန်းထိုးသလိုသွားလာလှုပ်ရှားပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီတပတ်တိုက်ပွဲစဉ်ကြီးမှာမိမိတို့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာသေမှာမကြောက်-ဆင်းရဲပင်ပန်းမှာ မကြောက်စိတ်ဓာတ်တွေကိုအမြင့်မားဆုံးဖေါ်ပြခဲ့ကြတယ်။ ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာ အောင်ပွဲကိုရရှိစေခဲ့တဲ့ အကြောင်းတရပ်လဲဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲစဉ်အတွင်း အားကောင်းချက်တွေအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့သလို တဖက်မှာလဲ မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ချိနဲ့ ချက်အားနဲချက်များကိုလဲ နောင်အနာဂါတ်တိုက်ပွဲများအတွက် သင်ခန်းစာများအဖြစ်ရရှိခဲ့တယ်။
မိမိတို့နဲ့အနီးဆုံးရှိရန်သူများကိုစတင်တိုက်ခိုက်စဉ်မှာ(၅၀၃)တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးတွေဟာရန်သူအခြေအနေတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မဆုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့။ အခြေခံစိတ်ဓာတ်အရသေနင်္ဂဗျူဟာအရ ရန်သူကိုအထင်သေးပြီး နည်းပရိယာယ်အရ ရန်သူကိုသတိပြုရမဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုမှန်ကန်စွာမဆုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် တိုက်ပွဲစီမံကိန်းအချို့ အကောင်အထည်မဖေါ်နိုင်ခဲ့။ ထို့အပြင်မဖြစ်သင့်တဲ့ထိခိုက်ကျဆုံးမှုများဖြစ်စေခဲ့ပြီး အမှတ်(၆)နဲ့(၇)စခန်းများ ထိုးစစ်ဆင်ရာမှာထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိခဲ့တယ်။ ဒီစခန်းတွေကိုထိုးတဲ့မိမိတို့ရဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေဟာ မီးအားအဖွဲ့(၁)ရဲ့အကူအညီနဲ့သာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်။ (၅၀၁)နဲ့(၃၀၃၅)တို့ရဲ့ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ရဲရဲရင့်ရင့်တိုက်ဟန်များကြောင့်သာ အောင်ပွဲရခဲ့တာဖြစ်တယ်။မဖြစ်သင့်တဲ့ကျဆုံးဒဏ်ရာရမှု များဖြစ်ခဲ့တယ်။
တိုက်ပွဲစတင်ပြီးနောက် ၀ိုင်းပတ်ဖြတ်တောက်ရေး တိုက်ဖွဲ့တွေဟာ တိုက်ပွဲဂွင်တခုလုံးရဲ့အိတ်ပေါက်ဝကို ဆွဲယူမစုစည်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ၀ိုင်းပတ်မှုဂွင်ကို ကျဉ်းမြောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့။ ထို့ကြောင့် ရန်သူစစ်ကြောင်း(၂)မှူး ဗိုလ်မှူးစန်းအောင်နဲ့ ဒဏ်ရာသမားအချို့အပါရန်သူဆယ်အချို့ထွက်ပြေးသွားနိုင်ခဲ့တယ်။ စခန်းတွေကို တိုက်သိမ်းပြီးနောက် အောင်ပွဲကိုတိုးချဲ့ဖို့လုပ်ဆောင်တဲံ့ရန်သူကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့တဲ့ တပ်များကြား အပြန်အလှနစည်းရုံးဆက်သွယ်မှု အားနည်းချက်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ မိမိတို့တပ်ဖွဲတွေခြင်း မှားယွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ရမဲ့နေရာတွေမှာ လုံးဝပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဒါကြောင့်ဘဲရန်သူအချို့လွတ်မြောက်သွားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ဖွဲ့တချို့ဟာ ရန်သူနဲ့ အနီးကပ်ချဉ်းကပ်လှုပ်ရှားချိန်မှာ တပ်ဖြန့်ခွဲမှုကောင်းစွာမလုပ်ဆောင်နိုင် လို့ ဦးတည်တိုက်ခိုက်မှုဟာ တမျက်နှာဖက်ဘဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်တချို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များမ ဖြစ်သင့်တဲ့ထိခိုက်မှုများဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
အားနည်းချက်နဲ့ချို့ယွင်းချက်အနဲနဲ့အများရှိခဲ့ပေမဲ့လဲဒီတိုက်ပွဲဟာမိမိတို့ပြည်သူ့တပ်မတော်ရဲ့ စစ်ရေးစွမ်းရည်နဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်။မိမိတို့အခြေခံဒေသရှိတပ်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲခံယုံကြည်စိတ်ကိုအကြီးအကျယ်ခိုင်မာစေခဲ့တယ်။
မန်ခူး-မန်ခါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကြီးဟာရန်သူခံစစ်စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံအတွက် အဖိုးတန်လှတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ရရှိစေခဲ့တယ်။
ဒီတိုက်ပွဲဟာနေရာယူခံစစ်စခန်းကြီးတွေကို မတိုက်ခိုက်သင့်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်က လွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။ ဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေမျိုးလို ရန်-ငါ(၂)ဖက် အချက်အလက်များပြည့်စုံရင့်မှည့်တယ်ဆိုယင် ချေမှုန်းနိုင်သမျှ ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာဘဲ။ ဒီတိုက်ပွဲဟာ မိမိတို့အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသ(၁၀)နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း အတိုင်းအတာနှိုင်းယှဉ် ချက်အရကြီးမားတဲ့ စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်။ အောင်မြင်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲလဲဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တပြည်လုံးအတိုင်းအတာအရ ရန်သူကအားသာပြီး မိမိတို့အားနည်းနေသေးတဲ့ အခြေအနေအောက်မှ အခြေခံဒေသတွင်း လူအင်အားရုပ်ဝတ္တုအင်အား ပြည်သူများရဲ့ထောက်ခံမှု၊မြေအနေအထားနဲ့ ရန်သူ့ စစ်တပ်ရဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးစိတ်ဓာတ်စတဲ့ ဖက်ပေါင်းစုံက မိမိတို့အတွက်အာမခံချက်နဲ့အကျိုးရှိတဲ့အခြေအနေအောက်မှာသာ ဒီတိုက်ပွဲလိုတစုံတရာနှိုင်းယှဉ်ချက်အရ ကြီးမားတဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုတိုက် နိုင်ပါတယ်။ ဒီလောက်မပြည့်စုံမရင့်မှည့်တဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့မတိုက်သင့်ပါဘူး။
ဒီတိုက်ပွဲဟာအချိန်တိုအတွင်းတပ်ရင်းလိုက်ချေမှုန်းရေးပွဲတပွဲသာဖြစ်လို့ရှည်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲစဉ် ကြီးမဟုတ်ပါ။ သို့ပေမဲ့အချိန်တိုအတွင်းလျှင်လျှင်မြန်မြန်နဲ့သာလွန်တဲ့အင်အားစုစည်းပြီးတပ်ရင်းလိုက် ချေမှုန်းရေး လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည်အရှေ့မြောက်နဲ့အရှေ့ပိုင်းစစ်မျက်နှာကြီးတခုလုံးကို ကြီးမားစွာ ဂယက်ရိုက်စေခဲ့တယ်။
`မင်းရန်အောင်´ပထမအဆင့်စစ်ဆင်ရေးမှာ မိမိတို့စခန်းအချို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှုအတွက်ထိုး တက်လာတဲ့ ရန်သူရဲ့တန်ပြန်တော်လှန်ရေးမာန်စွယ်ကိုလဲ ရိုက်ချိုးလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။အောင်ပွဲအချို့နဲ့ယစ် မူးနေတဲ့ ကစထမှူးဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီ ရမခတိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်လှဦး (၇၇)တပ်မမှူးဗိုလ်မှူးကြီးချစ်ဆွေ စတဲ့ တပ်မှူးကြီးများအားလုံး တုန်လှုပ်သွားကြတယ်။မူလက ဒုတိယအဆင့်ထိုးစစ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားမှုအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်။ မော်ဖါ-ကျိုင်းတုံဒေသတွင်းဖြန့်ကျဲထားတဲ့ရန်သူတပ်များအားလုံးကိုချက်ခြင်းစုစည်းလိုက်တယ်။စု စခန်းတွေကို ခွဲစခန်းတွေအဖြစ် ခွဲစခန်းတွေကိုစစ်ကြောင်းစခန်းတွေအဖြစ်စုစည်း ပြီး တမျက်နှာလုံး ခံစစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေ အမြန်လုပ်ဆောင်ရတဲ့ အထိ ရန်သူဟာ ကြောက်ရွံ့တုန် လှုပ်သွားခဲ့တယ်။
မန်ခူး-မန်ခါဒေသမှာခလရ(၃၃)တရင်းလုံးဖွဲ့စည်းပုံပျက်လောက်အောင်ချေမှုန်းခံရလို့လက်စား ခြေဖို့ ချက်ချင်းပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ ရမခရဲ့ထိုးစစ်စီမံကိန်း(ဗျူဟာ ၂ ခု၊တပ်ရင်း ၅ရင်း)ကို ဖျက်လိုက်ရပြီး ခံစစ် ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ရတဲ့အထိ ဂယက်ရိုက်ခဲ့တယ်။
ဒီတိုက်ပွဲတပွဲထဲနဲ့ မိမိတို့ဟာစစ်မျက်နှာတခုလုံး အချိန်(၂)လနီးပါး လက်ဦးမှုမဲ့နေရာမှ စစ်ရေးလက်ဦးမှုကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတော့တယ်။ ပါတီရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးခရီးကြမ်းကြီးမှာ အတက်အကျရှိစမြဲပါဘဲ။ ယခုလိုဒီရေနိမ့်နေချိန်မှာမိမိတို့အောင်ပွဲရတိုက်ပွဲများသမိုင်းအတွင်းမှာဒီ မန်ခူး-မန်ခါတိုက်ပွဲကြီးဟာ ဘယ်တော့မှ မေ့ပျောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲ ထာဝစဉ်ဥဒါန်းတွင်နေပါလိမ့်မယ်။
(၁)ဒုဗိုလ်မှူးကြီး သူရစိုးမင်း—- မိမိတို့ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးနောက်သူရဘွဲ့နဲ့စစ်ဖက်ရာထူးပြုတ်၍ မန္တလေးစစ်ဖက်တရားရုံးက ထောင်ချ၊ ထောင်ကလွ့တ်ပြီး (၂)နှစ်အတွင်းကွယ်လွန်သွား။တရားရင်ဆိုင်စဉ်အတူအဖမ်းခံရသူအားလုံးကိုယ်စား တာဝန်ယူသွား။ ထို့ကြောင့်ကျန်အရာရှိများတပ်ထဲပြန်ရောက်။
(၂) ဗိုလ်ကြီးညိုဝင်းမြင့်။ စစ်တပ်ထဲပြန်ရောက်ပြီး ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်လာ။နယ်စပ်စည်ပင်ဌာနပြောင်းလာ။ ရခိုင်ပြည်နယ် တိုင်းနယ်စပ်စည်ပင် ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လာ။ ၂၀၁၁-ရှမ်းမြောက်တိုင်း နယ်စပ်စည်ပင်မှူး ဖြစ်လာ။၂၀၁၂ လောင်ကိုင်းမှာ ဖျား-ကွယ်လွန်။
(၃)ဗိုလ်ကြီးသန်းဌေးလွင်။ စစ်တပ်ထဲပြန်ရောက်။ အလယ်ပိုင်းတိုင်းမှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဖြစ် တပ်ရင်းမှူးဖြစ်လာ။ နောက်အရပ်ဖက်သို့ပြောင်းရွှေ့သွား။
(၄)ဗိုလ်ညီထွန်း။ စစ်တပ်ထဲပြန်ရောက်။အဆင့်ဆင့်ရာထူးတက်ပြီး၊ဗိုလ်မှူးချုပ်ဖြစ်လာ။D.S.Aကျောင်း အုပ်ကြီးဖြစ်၊၀န်ထမ်းရွေ့းချယ်ရေးကော်မတီအဖြစ်အရပ်ဖက်ပြောင်း။
(၅)ဒုဗိုလ်တင်ထွဋ်ကျော်။စစ်တပ်ပြန်ရောက်။ဗိုလ်မှူးရာထူးအထိရောက်။စစ်ကိုင်းနယ်စပ်စည်ပင်လ/ထ ညွှန်မှူးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့သွား။
(၆)ဗိုလ်မှူးစန်းမောင်(ထွက်ပြေးပြီးလွတ်သွားသူ)။ ၁၉၇၈ မတ်လ နောင်လှိုင်ပန်ဖန်တိုက်ပွဲမိမိတို့လက် မှခွဲ(၅)မှူးအဖြစ်နဲ့ ပထမအကြိမ်လွတ်မြောက်ခဲ့။ မန်ခါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကြောင်း(၂)အဖွဲ့မှူးအဖြစ်ထပ်မံ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်။ နောက်ရာထူးအဆင့်ဆင့်တက်ပြီး နမခတိုင်း(မုံရွ့ာ)မှာဒုတိုင်းမှူးဖြစ်လာ။ နောက် သစ်မှောင်ခိုမှုနဲ့ပြုတ်။
Tags: ရခိုင်, အောင်တင်ထွန်း
3 Responses to အောင်တင်ထွန်း – မေ့ပျောက်၍မရနိုင်သော ပြည်သူ့တပ်မတော်ရဲ့အောင်ပွဲ
peace lover on September 13, 2014 at 8:54 am
all are our people. losing both side soldiers were losing our nation’s the bravest sons. no more fighting please. this is time for peace. look at people and country. please stop fighting.
Htwe Paing on September 15, 2014 at 1:41 pm
Your military should bound to Chinese Government bottom as they have supported you all the weapons to win that operation and makeawar with same nation. Why they become “Ba Ka Pa” ? Offcourse – military government did not treat us same level or equally.
Tin Aung on September 16, 2014 at 11:57 am
The title “Unforgettable victory of People’s Army” is actually mis-leading. It should be “How BCP conquered Burmese Army columns with the support of People’s Republic of China”. One time I was sympathetic to communism by reading propaganda publications such as Soviet Union, New China and also against Burma’s successive military regimes since my student days till now. To cut short my points (1) The original culprit for the suffering of our Burmese people is BCP, by name Thakin Soe and Thakin Than Tun. Without their insurgencyafew months after independence, there would not be any ethnic insurgency and our country would be democratic throughout and prospering. (2) People’s Republic of China was never good to our country despite our country was one of the first to recognize their independence offering good neighborhood relation. They fanned insurgency of BCP by providing all the necessary supports including arms, ammunition, manpower and ideology.